Crello: Onye na - ahụ maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ dị ka ị ga - aga na ọtụtụ puku ndebiri ndebiri | Martech Zone
Anyị bụ ndị nnukwu Fans nke Depositphotos, foto ọnụahịa dị ọnụ ọnụ, ihe eserese na vidiyo. Ọ bụ ya mere anyị ji depụta ha dị ka ndị na-akwado ma na-aga n'ihu ịkwalite ọrụ ha na saịtị anyị yana ndị ahịa anyị. N'ezie, anyị bụkwa ndị mmekọ. The otu n'azụ Depositphotos ugbu a ulo oru Crello, a free visual nchịkọta akụkọ na-kwadoro na ọtụtụ nde mara mma ndebiri.
Na-echeta Canva (na-enweghị mkpa ịbanye-elu), Crello na-enye ihe oyiyi 10,500 n'efu, gụnyere foto, akara ngosi, usoro, vektọ, okpokolo agba, ọdịdị, na ihe osise. Ihe a na-akwụ ụgwọ na-efu ihe ruru $ 0.99 nke ọ bụla, na iji ihe oyiyi eme ihe na-akparaghị ókè, ya mere, ihe akwụ ụgwọ na-adị maka iji ya na-akaghị aka.
Crello na-enyere ndị eserese aka aka imepụta onyonyo mgbasa ozi mmekọrịta dị ịtụnanya, ọkọlọtọ ad, akwụkwọ mmado, isi okwu email na ụdị ndị ọzọ ama ama. Crello gụnyekwara nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ zuru oke ka ị nwee ike bulite ma gbanwee ihe onyonyo gị.
Akụkụ nke Crello gụnyere:
Mfe Starter kit - nchịkọta nke ndebiri 6,000 + n'efu, ihe ntinye 10,000 + na ihe karịrị 60,000,000 ngwaahịa foto dị elu.
Mmepụta atsdị - Formatsdị 29 nwere ogo etinyere, gụnyere Mgbasa ozi Facebook, Facebook na-ekpuchi, Facebook Posts, Youtube Channel Art, Twitter Posts, Twitter Headers, Instagram Posts na Instagram Ads.
Personal metụ aka: nhọrọ iji bulite ihe onyonyo nke ya na mkpụrụ edemede iji mepụta ọdịnaya pụrụ iche.
mgbanwe: a set nke visual mmetụta na nzacha iji gbanwee ihe oyiyi.
Otutu ojiji ikike: zụrụ ihe ndị dị adị dị adị maka ijigharị.
Nnyocha na-egosi na ọdịnaya a na-ahụ anya na-eme oge 4.4 dị mma karịa naanị ederede nkịtị na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta, na ihe osise dị elu nwere mmetụta dị mma na itinye aka.
Crello nwere ike inye aka nye ndị mmadụ na-enweghị eserese eserese eserese, ndị chọrọ iji meziwanye ogo nke ọdịnaya ha na-ahụ anya, nke n'aka nke ya, na-enyere aka ịnọgide na-enwe mmekọrịta mmekọrịta dị mma.
Rụpụta Ihe Nlereanya Gị nke Mbụ!
Tags: okpukpucrellonkwụnye egofacebook mgbasa oziFacebook na-ekpuchifacebook postsndịnaMgbasa ozi InstagramOzi Instagramfoto nchịkọta akụkọIsi okwu TwitterOzi Twitternchịkọta akụkọNtanetị YouTube Channel